Ọkụ Limo hapụrụ ụmụ nwanyị 5 nwụrụ, 4 merụrụ ahụ na akwa akwa San Mateo - Ụwa 2022
Ọkụ Limo hapụrụ ụmụ nwanyị 5 nwụrụ, 4 merụrụ ahụ na akwa akwa San Mateo
Otu ndị nọọsụ itoolu, gụnyere nwunye ọhụrụ Neriza Fojas, sitere na mpaghara San Francisco Bay abanyeghị na mmiri ịsa ahụ agbamakwụkwọ ya.
Obere oge mgbe elekere iri gachara. na Satọde, ụgbọ ala Lincoln Town gbatịrị agbatị 1999 gbara ọkụ na mgbe ọ na-aga n'ebe ọdịda anyanwụ n'elu àkwà mmiri San Mateo-Hayward, ka San Francisco Chronicle na-akọ. Limo ahụ bịara na mberede na mberede mgbe otu n'ime ndị nọọsụ gwara Orville Brown, onye ọkwọ ụgbọ ala, "Sụ sịga, anwụrụ!" na "Bulie," Brown kwuru.
Brown nwere ike inyere ndị dị ndụ anọ ahụ aka, Nelia Arellano, 36, Jasmin de Guia, 34, Mary Grace Guardiano, 42 na Amalia Loyola, 48, gbapụ na nkebi ahụ. N'ime sekọnd 90 nke mbọ onye ọkwọ ụgbọ ala gbapụtara, ọkụ rikpuru limo ahụ.
Mkpụrụ obi ise ndị hapụrụ e kwuru na ndị nwụrụ anwụ na ebe ebe ndị ọzọ anọ ndị lanahụrụ na-emeso maka anwụrụ ọkụ inhalation na ọkụ kwuru California Highway Patrol.
Medscape na-akọ na ikuru anwụrụ ọkụ na-akpata ihe dịka pasenti 60 ruo 80 nke ọnwụ metụtara ọkụ na United States. Ihe ndị na-egbu egbu na anwụrụ ọkụ na ikuku ume nke nsị ndị a nwere ike ịkpata mmerụ ahụ dị n'ime nke na-emekarị ka ọnya ọkụ na-ahụ anya na-ekpuchi ya.
Nsogbu ndị metụtara ikuru anwụrụ ọkụ dị ọtụtụ. Mgbagwoju anya ozugbo na-abịa site na ọkụ ọkụ nwere akwụkwọ, ajị anụ, plastik, na ihe naịlọn. Ọ bụrụ na ihe ndị a na-agba ọkụ, ha na-emepụta cyanide, dị ka carbon monoxide na njedebe nke cyanide bụ cellular asphyxiation na ọnwụ na-ekwu na Ngalaba Ahụike na Ageing Australia.
O yikarịrị ka ụmụ nwanyị anọ ndị lanarịrịnụ bụ ndị natara ọkụ na ume iku ume ga-enwe ihe ize ndụ dị pasent 50 nke oyi baa.
Ndị na-enyocha ahụike ga-eji ndekọ eze chọpụta ndị nwụrụ ozugbo n'ebe ahụ. Robert Foucrault, San Mateo County's coroner, kesara na onwu onwu ga-agụnye "nyocha toxicology, yana nyocha ma ọ bụrụ na ahụrụ ngwa ngwa dị ka mmanya ma ọ bụ mmanụ ụgbọala n'ime ahụ."
Ka ihe kpatara ọkụ ahụ ka na-edoghị anya na California Highway Patrol na enweghị ihe akaebe na-egosi nkukota, ndị nchọpụta ga-anọgide na-achọ ihe akaebe nwere ike igosi nkọwa doro anya.
Azụmaahịa Friday Black 2021: Chekwa ihe ruru $600 na ahụike, ahụike na akụrụngwa mmega ahụ
Ọ bụ oge maka Black Friday ọzọ. Nke a bụ azụmahịa kacha mma na mgbatị ahụ na akụrụngwa ahụike ị nwere ike nweta n'afọ a
Ọgwụgwọ Eczema: Nke a bụ otu esi agwọ ọrịa akpụkpọ ahụ nke ọma
Ọ bụrụ na ị na-alụ ọgụ na eczema, mgbe ahụ ị maara nke ọma na ichiness, nkụ, ọzịza na ahụ erughị ala. Ihe ndị a ezuola imebi ụbọchị gị. Ma ọ̀ nwere ọgwụgwọ maka ya? Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma
Ihe akaebe na-egosi nke ahụ, Ee, Masks na-egbochi COVID-19 - na ihe mkpuchi ịwa ahụ bụ ụzọ a ga-esi gaa
Masks na-arụ ọrụ? Ma ọ bụrụ otu a, ị ga-erute maka N95, ihe mkpuchi ịwa ahụ, nkpuchi akwa ma ọ bụ gaiter?